Kaathuvaakula Rendu Kaadhal – Gold Channel Movies
Apr. 28, 2022India159 Min.Not Rated
ဒီတစ်ခါတော့ Gold Channel ပရိတ်သတ်တွေကို 2022မှာထွက်ရှိထားတဲ့Rating အရကြည့်ရင်လည်းကြည့်သင့်တဲ့Bollywoodကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဘဝမှာလူတိုင်းရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ကလေးဘဝကတည်းက “အဖေနဲ့အမေ ဘယ်သူ့ကိုပိုချစ်သလဲ”လို့ခဏခဏအမေးခံရပါတယ်။ မုန့်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုပဲစားရမယ်ဆိုတာမျိုး တွေဟာလူတိုင်းသေချာပေါက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာပါပဲ။ ဒီလိုပါပဲ ဒီဇာတ်ကားလေးထဲမှာ ရန်ဘိုဆိုတဲ့လူဟာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုရွေးရပါတော့တယ်။
ရန်ဘိုဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ မွေးကတည်းက အဖေသေပြီး အမေနာတာရှည်ဖြစ်သွားလို့ သူ့တစ်ရွာလုံးက သူ့ကို မောင်ကံဆိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ရန်ဘိုဟာကလေးဘဝထဲက မိခင်ဆီကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ ပြီး အခုအသက် ၃၀ ကျော်တဲ့အထိ ရည်းစားတစ်ယောက်မှမထားခဲ့ပါဘူး။ တစ်နေ့တော့ ကန်မနီနဲ့ခါဒီဂျာတို့နှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီး နှစ်ယောက်လုံးကိုလက်ထပ်ခွင့်တောင်းချိန်မှာ….
ရန်ဘို၊ကန်မနီနဲ့ခါဒီဂျာတို့သုံးယောက်ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဟာဘယ်လိုအဆုံးသတ်မှာလဲ၊ရန်ဘိုကရော ဘယ်သူနဲ့လက်ထပ်ဖြစ်မလဲ ရန်ဘို့ကံဟာသူအသက်ကြီးလာတော့ ပြောင်းလဲသွားမလား စတာတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ကြရအောင်
Reviewed by Benni
Translated By MaryChrist, Benni, Jzck & May Zoon
IMDb Rating 5.7 2,299 votes
Young Minah Kaif
Download G Drive SD 480p Myanmar 590 MB